Global Voices teny Malagasy » Manitsakitsaka lalàna ao Rosia ny mizara ity sarimiainan’i ‘Donald Duck’ nahazo Oscar ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Septambra 2015 4:28 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Naomy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Etazonia, Rosia, Ady & Fifandirana, Fanampenam-bava, Hehy, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina, Akon'ny RuNet
Pikantsary: Walt Disney, “Der Fuehrer's Face” (1942) / YouTube
Lehilahy roa ao Tomsk no voampanga  ho nampiely fitaovana extremista tsy ara-dalàna an-tserasera, tamin'ny famoahana hira sasantsasany nataon'ny tarika mpanambony ny fotsy hoditra iray, sy sarimiaina anti-fasista navoakan'i Walt Disney tamin'ny 1942, Der Fuehrer’s Face , izay mametraka an'i Donald Duck ho mpandray anjara fototra ary nandrombaka  ny ny Academy Award hoan'ny sarimiaina tamin'io taona voatonona io ihany.
Samy niaiky ny helony  ireo lehilahy roa ireo ary naneho fanenenana  tamin'ny filazana fa kisangisangy no nampielezany ireo fitaovana ireo nandritra ny asara 2013. Nampandoa onitra 3000 robla (tokotokony ho 40 dolara amerikana) tsirairay avy an-dry zalahy ny mpitsara fa tsy nanaiky ny hamoaka didy hanagadra 15 andro azy ireo izay heloka faratampony amin'ny fampielezana fitaovana extremista amin'ny fehezandalàna rosiana 20.29.
Voarara ao Rosia hatramin'ny desambra 2010 ny sarimiaina Donald Duck, raha nataon'ny fitsarana iray ao Kamchatka hanampy isa ny lisitry ny fitaovana extremista tsy ara-dalàna, miaraka amin'ny rakikira mpanavakavaka hafa ampolony  hita nozarain'ny lehilahy iray manana anarana hoe Sergey Semenov izany. (Ny mahavariana dia nadikan'ny  mpampanoa lalàna ao Tomsk arabakinteny ny anaran'i Donald Duck izay hafa noho ny fanononana hita ao amin'ny lisitra federaly manondro ireo fitaovana extremista; ka mahatonga ny sarimiaina roa ho toy ny avy amin'ny filma samihafa.)
Fanondrotondroana manavakavaka ny “Japoney fahavalo.” Pikantsary: Walt Disney, “Der Fuehrer's Face” (1942) / YouTube
Araka an'i Sova, fikambanana iray miorina ao Moskoa mpanaramaso ny famonoan'olona ateraky ny fankahalana, fa ny fandrarana ny sarimiainan'i Disney miaraka amin'ny fitaovana hafa no manaporofo fa tsy mijery ny lahatsary tsirairay ao amin'ny tahirin'i Semenov akory ny manampahefana, mialoha ny handrarana azy rehetra. “Izao tranga izao,” hoy ny fanambaràna  ao amin'ny tranonkalan'i Sova, “no mampiseho indray ny mahatsy misy ilàna azy, eny ny mahamampididoza ny fametrahana lisitra federaly ho fitaovana fanarahamaso ary mampahatsiahy antsika fa ny vahaolana tsara indrindra dia ny manaisotra azy rehetra miaraka.”
Der Fuehrer’s Face dia manasongadina ny fiainan'i Donald Duck ao anatin'ny fitondrana jadona fasista, izay andraisany baiko voambana basy hanao asam-panakambanana baomba ao amin'ny orinasa iray. Voarahona hovonoina ho faty izy ary tsy maintsy manao arahaba mananga-tanana isaky ny mahita ny sarintavan'i Adolf Hilter rehetra hitany. Asongadin'ny sarimiaina ihany koa ny ny filazalazana manavakavaka ny Japoney, izay araka ny fampielezankevitra amerikana mandritra ny fotoan'ady dia manokatra vava ady anankiroa. Any amin'ny faran'ny filma i Donald Duck no taitra ary mahatsapa fa hay nofy ihany izany rehetra izany fa ny tena marina dia miaina ao Etazonia izy. Amin'ny fanorohana ny endrika bitiky ny Tsangambaton'ny Fahafahana i Donald no milaza ny teniny farany hoe: “Akory ny hafaliako fa olompirenen'i Etazonian'i Amerika aho!”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/08/74136/
 niaiky ny helony: http://seversky.tms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=11280566&delo_id=1500001&new=&text_number=1
 naneho fanenenana: http://seversky.tms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=11280582&delo_id=1500001&new=&text_number=1
 rakikira mpanavakavaka hafa ampolony: http://minjust.ru/ru/extremist-materials?field_extremist_content_value=%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4